Sool:- Shir Lagu Taageerayo Midnimada iyo Wadajirka Somaliland Oo Sool Lagu Soo Gabagabeeyey.
Thursday June, 21 2018 - 05:25:45
Friday March 09, 2018 - 18:10:42 in by salman abdi
Sool:- Shir Lagu Taageerayo Midnimada iyo Wadajirka Somaliland Oo Sool Lagu Soo Gabagabeeyey. Shirkan oo maalmihii u danbeeyey u soconayey beesha degta Koonfurta iyo Galbeedka degmada Laas-caanood ayaa waxaa isugu yimi siyaasiyiin mabbaadii kala duwan wata, iyadoo uu ka mid ahaa Prof. Cali Khaliif Galadhr, madaxweynihii Khaatumo ee heshiiska la furay Somaliland.
Shirkan oo laba qodob gogol dhig u ahaayeen oo kala ah go’aan ka qaadashada wadahadala Khaatumo iyo Somaliland iyo sidii wax looga qaban lahaa xoolo fara-badan oo beesha lagu xukumay dagaalo badan oo ay galeen.
Qodobadii ay so saareen ayaa waxaa ka mid ahaa Sudan:-
1: In Beeshu ay kala mid tahay Beelaha Dhulbahante Taageerida Wadahalada Nabaded ee u socda Somaliland iyo Khaatumo .
2:In La Xoojiyo Nabada iyo Adkaynta Midnimada .
3: In la dhowro Deegaanka iyo Isticmaaalka dhulka .
4:In la horumariyo ganasiga iyo Maalgashiga .
5:In Midnimada iyo Wadajirka Beesha La ilaaliyo .
6 :In la dhawro Xeerarka iyo Heshiisyada beelaha ay la gashay beesha ay dhawrto .
7:Beeshu waxay soo dhawaynaysaa wadajirka iyo Midnimada Beelwaynta Dhulbahante .
8: Beeshu Waxay baaq nabadeed u diraysaa Walaalaha shaqaaqada Cusubi ku dhexmartey deegaanada GOCAN-DHAALE iyo Horufadhi ee gobolka Cayn .
9:Beeshu waxay isla garatay in laga fogaado wax kasta oo u keeni kara nabada gelyo xumo iwm .
10:Beeshu Waxay isku raacday in la adkeeyo oo la dhamaystiro Heshiisyadii Nabadeed ee ay la gashay Beelaha Cabdi Garaad iyo Cumar Maxamuud.
11: Beeshu waxay soo dhawanyasaa Nabad gelyo iyo wanaag ka dhacda dhamaan geeska Africa .
12:In ay Beeshu iska bixiso Magaha lagu leeyahay mudadii lagu heshiiyey si loo ilaaliyo wada noolaanshaha iyo nabada .
Si kastaba ha ahaatee qodobka koowaad oo ah ka shirka ugu muhiimsanaa ayaa dhaliyey muran goobaha xanshashaqa maadaama uu yahay mid hadoodilan aan si cad u qeexin go’aanka, in kasta oo loo badinayo in ay tahay halkii madaxda dhaqanku mareen taas oo Prof Galayr ka dhigaysa in uu cadhuuftiisa dib uga leqo hadaan qaab kale loogu sharixin.
20/06/2018 - 18:41:44